စက်တင်ဘာလ မွေးနေ့ထဲမှာ သီချင်းသစ်တစ်ပုဒ် ထွက်မယ့် ရှင်ဖုန်း | Popular
August 13, 2019 Asian Fame
ရှင်ဖုန်းတို့ လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ခေတ်တုန်းက ဟိုနေ ရာမှာလည်းရှင်ဖုန်း၊ ဒီနေရာမှာ လည်းရှင်ဖုန်း။ သူ့ရဲ့တေးသံ တွေ နေရာတော်တော်များများမှာ လွင့်ပျံခဲ့တယ်။ အခုလက် ရှိအချိန်အထိ လူလတ်ပိုင်းတော်တော်များများကို မေးကြည့်လိုက်ရင် ရှင်ဖုန်းပရိသတ်တော်တော်များများရှိသေးတယ်။ သူ့အနေနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ သီချင်းအထွက်ကျဲသွားခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်နဲ့ အလှမ်းဝေးနေခဲ့တဲ့အပေါ် ရှင်ဖုန်းက “သီချင်းအသစ်မထွက်တာတော့ ရှင်ဖုန်းတော်တော်လေးကိုကြာ သွားပါပြီ။ တစ်ယောက်တည်း Single Song လေးတွေလည်း ထွက် ဖို့အတွက် စီစဉ်နေပါတယ်။ ဘာတွေ ကွာခြားသွားလဲဆိုတော့ အရမ်းတော့ မကွာခြားဘူးထင်ပါတယ်။ သီချင်းအပေါ်မှာထား တဲ့စိတ်နဲ့ ရူးသွပ်မှုကတော့ အရင်အတိုင်းပါပဲရှင့်” လို့ သူက ပြောပါတယ်။ ရှင်ဖုန်းရယ်၊ ရေဗက်္ကာဝင်းရယ်၊ ယုဇနရယ်၊ ခင်ဘုဏ်းရယ် သူငယ်ချင်း ၄ယောက်အခွေလေးထွက်ဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရတဲ့အတွက် အဲဒီအကြောင်းမေးဖြစ်ဖြစ် တဲ့အခါ . . .
“လောလောဆယ်ကတော့ ရှင်ဖုန်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့ လက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ Rich Lady ဆိုတဲ့ အမ်တီဗီ လေး ထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်။ အခုရှင်ဖုန်းတို့ ဒီနှစ်ကုန်မှာ အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပေါင်းပြီးထုတ်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ Group Song လည်း ပါမယ်။ နောက်အမ်တီဗီလည်း ပါမယ်ပေါ့။ တစ်ခါ တည်းထွက်ပါမယ်” လို့ ရှင်ဖုန်းကပြောပါတယ်။ မျိုး ဆက်သစ်အဆိုဂီတသမားတွေအပေါ် ရှင်ဖုန်းရဲ့ အမြင်က . . .
“အကုန်လုံးက အဆိုပြိုင်ပွဲတွေ လည်းရှိတဲ့အခါ ကျတော့ သူတို့တွေက အရမ်းကို Qualify ဖြစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေအများကြီးထွက်လာတာပေါ့ နော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူတွေအများကြီး ကြားထဲကမှ သူတို့စိစစ်ပြီးတော့မှ ဒီနေရာ ရောက်လာတာ ဆိုတော့လေ။ အဲဒီအခါကျတော့ ၀မ်းသာပါတယ်။ အရမ်းလည်းအဆို ကောင်းကြ တယ်။ တော်လည်းတော်ကြတယ်”လို့ ဆိုပါတယ်။ အလှမ်း ဝေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအပေါ်ဘာများ ပြောချင်လဲလို့ ရှင်ဖုန်းကိုမေးတော့ . . .
“စက်တင်ဘာက ရှင်ဖုန်းရဲ့ မွေးနေ့ပေါ့နော်။ မွေးနေ့မှာ ရှင်ဖုန်း ရဲ့Single Song လေးဖြစ် တဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ရှင်ဖုန်းအွန်လိုင်းမှာ အမ်တီဗီအနေနဲ့တင်ဖို့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအ ခါကျလို့ရှိရင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါ” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
လူချွန်လူကောင်းတွေပေါ်သလို ပျက်စီးပြီး ဖရိုဖရဲဖြစ်တဲ့ လူငယ်တွေ ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေးတွေ အများကြီးရှိလာမှာပဲ ဆရာမ စမ်းစမ်းနွဲ့ (သာယာဝတီ)
အဆိုတော် ရွှေထူးရဲ့ ဘဝကို အခြေခံပြီး ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးမယ့် ဒါရိုက်တာ ညွန့်မြန်မာညီညီအောင်
စင်ကာပူ ပရိသတ်ကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုတဲ့ ဥပါယ်တံမျဉ် အဖွဲ့သားများ